Akụkọ - igwe kwụ otu ebe
Ugbua a commuter kpochapụwo, na mpịachi igwe kwụ otu ebeka dị ọhụrụ na ebe ịgba ịnyịnya. Mana ha abụghị naanị maka ndị njem na -achọ inwe ike iji ụgbọ ala ha wụnye na bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko, yana chekwaa ya n'okpuru tebụl ha n'ọrụ. Ha nwekwara ike bụrụ nhọrọ dị egwu maka onye ọ bụla nwere obere nchekwa n'ụlọ ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ inwe ike ibuga igwe kwụ otu ebe ha ngwa ngwa.Ịkpakọba ihe anyịnya igwe daa n'ime obere mkpanaaka dị mma, dị mma maka ibuli elu, ịtụba na buut ụgbọ ala gị ma ọ bụ ọbụna ịbanye dị ka akpa ụlọ n'ime ụgbọ elu.
Isi ihe dị mkpa na ịhọrọ nke ziri ezi mpịachi igwe kwụ otu eben'ihi na ị bụ nha wheel. A na-enwekarị nha ise ịhọrọ site, sitere na kọmpụta kọmpụta 16-inch ruo wiil ndị nwere nha 26-inch. N'ụzọ doro anya, ka wiil ahụ na -adị ntakịrị, ka igwe kwụ otu ebe ị na -apịakọta ga -adịwanye ala ma apịaji ya. Yabụ, ọ bụrụ na ebe nchekwa dị oke mma, họrọ otu n'ime obere wheel nha.
Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na -agba ịnyịnya ígwè na -achọpụta na obere wiil na -enye ahụmịhe ịnya ụgbọ ala. Nnukwu wiil ga -agagharị na mkpọtụ na mgbawa. Eleghị anya nha wheel kacha ewu ewu maka imebi mpịakọta mpịachi na ahụmịhe ịgba ịnyịnya na-atọ ụtọ bụ nhọrọ nke anụ ọhịa 20. Ogo nke etiti a ka na -ebugharị ebugharị mana ọ kwesịrị inye njem kwụ ọtọ ma dị larịị.